कांग्रेस कार्यसमितिको आइतबार ११ बजे बस्ने
काठमाडौं । शुक्रबार बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्य काठमाडौं बाहिर रहेकाले शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि बस्ने वैठक स्थगन गरिएको हो । पार्टी मुख्यालयले भने वैठक विशेष कारणवस स्थगित भएको
ईयुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने संघीय गठबन्धनको चेतावनी
काठमाडौं, ५ वैशाख । पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनले युरोपियन युनियनले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धनले ईयुको प्रतिवेदन लागु गर्न आग्रह गरेको हो । इयुको प्रतिवेदन लागु नगरिए सरकारविरुद्ध कडा
काठमाडौँ ५ वैशाख । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका नाममा प्रदेशमा गृह मन्त्रालय छन्, तर उनीहरुसँग आफ्ना हवल्दार र सिपाही पनि छैनन् । संविधानअनुसार हेरक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी राख्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव दिन गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको
दुई वर्षभित्र संघीय संसदको आफ्नै भवन
काठमाडौँ ५ वैशाख । सरकारले २ वर्षमा संघीय संसद् भवन बनाउने तयारी थालेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संघीय संसद् भवन कम्प्लेक्स बनाउने कार्ययोजना बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । पुतली बगैँचामा रहेको नेपाली सेनालाई एक महिनाभित्र
सलमान खान नेपालसहित चार देश जान पाउने
मुम्बई । राजस्थान राज्यमा २० वर्षअघि भएको कालो हरिण शिकार प्रकरणमा बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई जमान मिलेपछि फेरि अर्को राहत मिलेको छ । मंगलवार सेसन कोर्टले सलमान खानलाई विदेश जाने अनुमति दिएको छ। यो आदेशसँगै अब आगामी जेठमा काठमाडौँमा हुने कन्सर्टमा पनि सलमान आउन पाउने भएका छन् । सलमान खानले
यातायात समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ ५ वैशाख । सरकारले यातायातसम्वन्धी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता तथा नविकरण नै नगर्ने निर्णय लिएको छ । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले भने यातायात समितिहरु भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यातायात सम्बद्धसंघसंस्था
विवादित विषयमा टुङ्गो लगाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई
काठमाडौँ, ४ वैशाख । नेकपा ‘एमाले’ र नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’को आजको बैठकमा पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले एकताका लागि मिल्न बाँकी विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो जिम्मेवारी
आफ्नै समूह सम्हाल्न पौडेललाई सकस !
काठमाडौँ ४ वैशाख । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई समेत सभापति शेरबहादुर देउवालाई जस्तै आफ्नो समूह सम्हाल्न सकस देखिएको छ । निर्वाचन हार्नुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र भूमिकालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएर अग्रिम महाधिवेशनको आवाज उठाइरहेका बेला पौडेललाई
प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश लिएर परराष्ट्रमन्त्री चीन जाँदै
काठमाडौँ ३ वैशाख । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पाँचदिने भ्रमणका लागि आज चीन प्रस्थान गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ओलीको चीन भ्रमण तयारी तथा नेपाल चीनबीच भएका सहमति सम्झौताको कार्यन्वयन अवस्थाबारे छलफल गर्न ज्ञवाली सोमबार राति ११ वजे चीनका लागि प्रस्थान गर्ने परराष्ट्रले जनाएको
निर्वाचनमा पराजयको विषयलाई लिएर काँग्रेसका तीन नेताबिच एउटै मञ्चमा चर्काचर्की
काठमाडौँ २ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले र माओवादीबीच भएको एकताले निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित हार व्यहोर्नु परेको बताएका छन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको कार्यक्रममा आइतबार बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले र माओवादीको एकतालाई चुनौतीको रूपमा लिएर पार्टी
महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नहुँदा पार्टी एकीकरण अन्योलमा
काठमाडौँ २ वैशाख । कम्युनिष्ट स्थापना दिवसको अवसरमा आगामी ९ गते पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेका वाम गठबन्धनको वैठक प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण अघि चैत २० गते एकता संयोजन समितिको वैठक बसेपनि शीर्ष नेताहरूको व्यस्तताका कारण १२ दिन यता बैठकसमेत वस्ने सकेको छैन् । यी विषयमा
समान हैसियतविना पार्टी एकता नगर्न अध्यक्ष दाहाललाई वाईसीएलको सुझाव
काठमाडौँ २ वैशाख । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको समय नजिकिदै गर्दा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाईसीएलले एकीकृत पार्टीको विधान प्रस्तावनामा जनयुद्ध शव्द नराख्ने हो भने र केन्द्रीय कमिटीमा ५० प्रतिशत हैसियत नपाउने हो भने एमालेसँग पार्टी एकता नगर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको
पार्टी एकता समानताको आधारमा वैशाख ९ गते नै हुन्छःरावल
काठमाडौ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता समानताकै आधारमा हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रावलले ‘‘सम्मानजनक रुपमै एकता हुन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन् ।’ उनले पार्टी एकताको गृहकार्य भैरहेकोले अब बस्ने एकता
नेपाली काँग्रेसले मनाएन आफ्नो स्थापना दिवस, यस्तो छ काँग्रेसको इतिहास
काठमाडौँ। पार्टी स्थापना भएको ६८ वर्ष पूरा भए पनि नेपाली काँग्रेसले मङ्गलबार कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेन । गतसाता नेता खुमबहादुर खड्काको निधन भएका कारण पार्टीले स्थापना दिवस नमनाउने निर्णय गरेको हो । बुधबार खड्काको १३औँ पुण्यतिथि परेको छ । यस्तो छ काँग्रेसको इतिहास राणा शासन समाप्त हुनुभन्दा
आईजीपीमा खनाललाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट खरेलले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ‘आईजीपी’मा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेपछि सहव्याची रमेश खरेल असन्तुष्ट छन् । उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकसँग कुरा गर्दै खरेलले भनेका छन्, ‘आईजीपीमा नियुक्त साथीलाई बधाई दिन चाहान्छु । २९ वर्ष नेपाल प्रहरीको सेवा गरें
एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा फेरि ‘ब्रेक’
काठमाडौं । नयाँ पत्रिका दैनिकले एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको समाचार भित्री पृष्ठमा छापेको छ। एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न र सांगठनिक रुपमा कुन पार्टीको कति प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा दुवै पार्टी आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि संवाद प्रक्रिया नै रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ । एकता
निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार, यस्ता छन् नालिबेली
काठमाडौं । नयाँ पत्रिका दैनिकले निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउन तयार पारिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगमा चरम अनियमितता छ । महालेखाले असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगमा सयौं अनियमितता भेट्टाएको समाचारमा
श्वेतपत्रबारे कांग्रेस धारणा सार्वजनिक– अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउन खोजेको आरोप
काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउन सरकारले आफ्नो अनुकुल तथ्यहरूलाई
देउवालाई कति भन्ने पार्टी ध्वस्त भइसक्यो
चितवन । नेपाली काँग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म पार्टीले गति लिन नसक्ने बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारहररूसँग कुराकानी गर्दै उनले पार्टी संगठन चलायमान हुन नसक्दा ध्वस्त बनेको बताए । कोइरालाले दुई महिनामा गर्नुपर्ने काम दुई वर्षमा पनि हुन नसकेको बताउँदै भने , “दुई वर्ष पुग्यो
छिमेकीसँगको सम्बन्ध समस्याग्रस्त छ : मणिशंकर ऐयर
भारतीय नेसनल कांग्रेसका नेता मणिशंकर ऐयरसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र नेपाल-भारत सम्बन्धबारे गरिएको कुराकानीः नेपालका प्रधानमन्त्रीले पारस्परिक सम्मान र बराबरीको सम्बन्धको कुरा गर्नुभएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा त्यस्तो सम्भव छ ? यो भ्रमणको उपलब्धिबारे म अहिले केही भन्न
काठमाडौँ । सरकारले एकसाथ ३० जना सचिवहरुको सरुवा गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सरकारी निवासमा शुक्रबार बसेको बैठकमा माओवादीका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्याप्त परामर्श नगरी सचिवहरुको सरुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली तीनदिने राजकीय भ्रमणको शिलशिलामा शुक्रवार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जाँदैछन् । ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार बिहान ११ बजे दिल्ली पुग्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवम् साहित्यकार कमलराज रेग्मीको निधन
अमरवाणी संवाददाता /काठमाडौं । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवम् साहित्यकार कमलराज रेग्मीको निधन भएको छ । १९८४ भदौ ६ गते पाल्पामा मेहल्धारामा जन्मिएका रेग्मीको ९१ वर्षको उमेरमा आज विहान ललितपुरस्थित धोविघाट निवासमा ५ बजेर २५ मिनेटमा निधन भएको रेग्मीकी बुहारी उपसाना रेग्मीले अमरवाणी अनलाइनलाई जानकारी दिइन्
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डाः गंगामा नेपाली पानीजहाज
काठमाडौँ । भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फराकिलो छाति बनाएर प्रस्तुत हुन भारतीय संसदका विपक्षी दलहरुले नरेन्द्र मोदीलाई दिएको सुझावलाई कान्तिपुरले एंकर बनाएको छ । अन्नपूर्णले ‘प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुझाव– राष्ट्रहितको सम्मान गर’ शीर्षकमा मुख्य खबर
काठमाडौँ । निर्वाचन कानूनमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड व्यवस्था गरेपछि अहिलेको संघीय संसदमा धेरै दलको अस्तित्व संकटमा परेको छ । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भएपछि प्रतिनिधिसभामा सहभागी १८ मध्ये पाँच दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेका तर मुलुकभर संगठन
एमाले–माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठक जारी
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक आज जारी छ । बैठक बिहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ । बैठकमा कार्यदलले मिलाउन नसकेका प्राविधिक विषयमा सहमतिको प्रयास जारी छ । एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न के हुने र विधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द
सुरक्षा नचाहिने बाबुराम के चाहन्छन् ?
अमरवाणी संवाददाता /काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई चर्चामा आइरहने व्यक्ति हुन् । सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूलाई उल्लेख्य रूपमा सेवा सुविधा दिएको छ । विशिष्ट नेतालाहरूलाई सुरक्षा प्रदान पनि गरेको
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रीपरिषद् वैठकद्वारा स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरू
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबमर बसेको बैठकले यही चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भ्रमण हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का अन्य
विकासका लागि तुरुन्तै पार्टी एकता : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा ‘एमाले’ र नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’ बीच समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको लक्ष्यसहित तुरुन्तै पार्टी एकता हुने बताएका छन् । नेकपा ‘एमाले’ केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा स्थापित ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान गर्न सो
खड्काको शोकमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको निधनको शोकमा कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । निर्वाचन समीक्षा गर्न भनेर यही चैत ९ गतेबाट कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको थियो । आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा खड्काको निधनमा शोक प्रस्ताव